Plentywaka Partners GUO Transportgbọ njem Expmụbawanye Onyinye Njem Bus
Mmekọrịta ahụ na-eweta bọs 600 ọzọ nke ga-enyekwa ụzọ ọhụrụ
Leadinglọ ọrụ na-ahụ maka njem ụgbọ njem Naịjirịa, Plentywaka, na GUO Transport Services Limited, otu n'ime ụlọ ọrụ ụgbọ njem kachasị ukwuu na Nigeria, nwere ọkachamara na ụlọ ọrụ na-eme njem na mba ndị ọzọ, ekwuputala mmekorita iji mee ka ahụmịhe ụgbọ njem ụgbọ ala dị mfe maka ndị Nigeria.
Mmekọrịta a ga - ahụ na ụlọ ọrụ abụọ jikọtara teknụzụ, na azụmaahịa, iweta njem n'ime otu ngwaahịa dị mfe, ngwa mkpanaaka Plentywaka.
Tọrọ ntọala na 1980, GUO Transport Services Limited bụ nkewa nke GU Okeke & Sons Ltd.
Aha ụlọ na ụlọ ọrụ njem na otu n'ime ndị na-enye nnukwu ụgbọ njem na njem ụgbọ njem, na-eje ozi karịa ebe 200 gafee Nigeria na West Africa na ụgbọ mmiri nke oge a, gburugburu ebe obibi.
Companylọ ọrụ ahụ aghọwo ihe ngosi na ụlọ ọrụ njem, na-enye njem dị nchebe, nke na-atọ ụtọ ma dịkwa ọnụ maka ọtụtụ nde ndị njem kwa afọ.
Plentywaka nwere n’ime ọnwa iri abụọ gara aga, mechara ihe karịrị narị puku atọ na iri puku ise ma mepee ọrụ njem njem nke etiti a na-akpọ Travelwaka, nke na-enye tiketi dị ọnụ ala site na nnukwu ụlọ ọrụ ndị njem ụgbọ ala dịka GUO Transport Services Limited na ụlọ ọrụ ndị njem ọzọ.
Plentywaka na-eme ka nzụta tiketi maka ndị njem na-agagharị na mba ahụ, ọ na-enyekwa ndị ọrụ njem njem okomoko nke ịdebanye ụgbọ ala na ngwa ngwa ngwa ngwa Plentywaka, ma na-enyekwa ndị ọrụ ya nhọrọ nhọrọ sitere n'ọtụtụ ụlọ ọrụ njem na otu ọchụchọ.
Nke a na-enyere ndị ọrụ ohere ịhazi njem ha dum na-enweghị ịhapụ nkasi obi nke ụlọ ha ma ọ bụ kwụrụ n'ahịrị dị ogologo.
N'ihi mmekọrịta a, GUO Transport Services Limited na Plentywaka ga-enye ọtụtụ nde ndị njem ụgbọ ala iji chọpụta steeti dị iche iche na Naịjirịa site na ngwa Plentywaka.
GUO Transport Services Limited ga-ebugharị n'elu ụgbọ ala 600 iji bulie ụgbọ mmiri Plentywaka ruo 820 + ugbo ala.
Nke a ga - apụtakwa ụzọ ndị bụ isi dịka Lagos - Abuja na 200 ọzọ ga - emepe ugbu a na Plentywaka App maka ndị ahịa iji debe ha na ọnụego ọnụ.
N'ikwu okwu banyere mmekorita ahụ, Onyeka Akumah, Co-guzobere, na onye isi oche nke Plentywaka kwuru, sị:
“Mmekọrịta nke GUO Transport Services Limited dị mma maka ndị ọrụ anyị ọkachasị n’ihi na anyị ma na ọtụtụ n’ime ha nọ na-achọ ụzọ GUO na-arụ ọrụ.
Obi dị anyị ezigbo ụtọ na anyị emepụtala teknụzụ dị na ngwa mkpanaka dị mfe iji rụọ ọrụ ga-eme ka ahụmịhe njem ahụ nwee ntụpọ maka ndị Naijiria.
N’ikwu okwu banyere mmekọrịta a, Kene Okeke onye bụ Director Of Operations maka GUO Transport Services Limited, kwuru nke a:
“Obi dị anyị ụtọ maka mmekọrịta a na PlentyWaka n’ihi na ụkpụrụ na onyinye ha dabara na nke anyị. Ugbu a, anyị nwere ike ịkwaga ọtụtụ mmadụ gafee Naịjirịa nke ọma na enweghị nsogbu.
Anyị kwenyere na ndị njem ọ bụla kwesịrị ịnya ụgbọ ala dị mfe ma dị mfe ma na-aga ebe ha na-aga.
Tụle ego PlentyWaka nyere na nke a, anyị nwere obi ụtọ ịbanye na ụgbọ mmiri ahụ soro ha. ”
Malite taa, ndị njem nwere ike iji ngwa Plentywaka na-agagharị agagharị ma ọ bụ tinye akwụkwọ njem ụgbọ ha kwa ụbọchị site na iji ọrụ ụgbọ ala ma ọ bụ akwụkwọ ma zụta tiketi njem ụgbọ ala site na nkasi obi nke ụlọ ha, na-egbutu ogologo ahịrị na akpa na-eme ara ara.
Ọbụna karịa, ogologo izu ụka dị ebe a ma ị nwere ike ide akwụkwọ tiketi ụgbọ ala GUO gaa steeti n'ime Nigeria wee nwee ọnụego 5-10%.
Plentywaka ga-aga n'ihu ịbanye na ndị na-ahụ maka ụgbọ ala na-eduga na Nigeria ka anyị na-achọ ịghọ onye nchịkọta kachasị nke ndị ọrụ ụgbọ ala na mba ahụ na-enye ụzọ ka mma iji jikwaa na nyochaa ntinye akwụkwọ na ndị ahịa ha.